« Can 2017 » any Gabon : hanao ny manasa-dalana i Burkina Faso sy i Ejypta | NewsMada
« Can 2017 » any Gabon : hanao ny manasa-dalana i Burkina Faso sy i Ejypta
Miverina amin’ny heriny indray. Tafakatra amin’ny manasa-dalana i Ejypta rehefa nanilika ny rahalahiny, ny Maraokanina, teo amin’ny ampahefa-dalana faharoa, afakomaly. Efa fantatra avokoa ireo ekipa efatra tafakatra amin’ny Can any Gabon, eo amin’ny taranja baolina kitra.
Baolina tokana tafiditra tany ny amin’ny fizaram-potoana faharoa izao nitondra ny ekipa Ejypsianina izao ho any amin’ny dingan’ny manasa-dalana ka hihaonany amin’i Borkina Faso. Niady hatramin’ny farany ny lalao, saingy tsy nahatohitra ny ekipan’i Faraona ny Lions de l’Atlas-n’i Maraoka. Nanantombo teo amin’ny fanafihana sy ny tsindry ny Liona Maraokanina, indrindra teo amin’ny fizaram-potoana voalohany. Nanova paikady anefa ny Ejypsianina tamin’ny 45 mn faharoa ka izao nahomby izao tamin’ny alalan’i Kahraba, teo amin’ny minitra faha-88. Vita hatreo ny nofinofin’ilay mpanazatra Frantsay, Hervé Renard nitantana ny Maraokanina raha efa nibata ny amboara kosa ireo ekipa roa efa notantaniny teo aloha. Anisan’izany ny Zambianina sy ny Elefanta Ivorianina.
Mpanjakan’ny baolina kitra afrikanina
Midika koa izany fa hamerina ny lazany sy ny maha mpanjakan’ny baolina kitra aty Afrika azy ny Faraona ary izao miverina amin’ny heriny izao indray. Hany nahitana azy ireo farany teo amin’ny sehatra avo tahaka izao sy teo anivon’ny fifanintsanana amin’ny “Mondial” ny tany amin’ny taona 2011. Niaina korontana politika ny tany an-toerana tamin’izany. Mikasa ny hanao dingan-dava izy ireo sady hany ekipa tokana hisolo tena ny magrebianina amin’izao lalao any Gabon izao raha efa raraka avokoa ireo rahalahiny.
Tsiahivina fa hotanterahina ny 1 febroary ny manasa-dalana voalohany, hifanandrinan’ny Liona Kameroney sy ny Kintana maintin’i Ghana. Ny 2 febroary kosa indray ny manasa-dalana faharoa ka hifampitana ny Les Etalons-n’i Burkina Faso sy ny Faraonan’i Ejypta.